စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ - ခရစ္စမတ်အပိုဆုလှည့်ဖျား၏လျှို့ဝှက်ချက်များ |
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – ခရစ္စမတ်အပိုဆုလှည့်ဖျား၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခွအေန:
ဒီမြှင့်တင်ရေးတက်ကြွ 7th ဖြစ်လိမ့်မည်, 14ကြိမ်မြောက်, 21st နှင့် 28 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမား£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းရပါမည်.
တစ်ဆုကြေးငွေ 10 လှည့်ဖျားသင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
ဤရွေ့ကားလှည့်ဖျားသာခရစ္စမတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များအပေါ် 10p တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 10 ထိုမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းအတွင်းသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်ခရစ္စမတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များအပေါ် spins.
အခမဲ့လှည့်ဖျားအထိကြာနိုင်ပါတယ်3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး
သာကဤဂိမ်းအပေါ် wagering: Starburst, Gonzo ရှာပုံတော်, အမွှာလည်, Spinata Grande, ထုချွန်းပုံ, piggy စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်, South Park, ဂျက် Hammer, ချိတ်သူရဲကောင်းများ, ငါ့ကို dazzle, နီယွန် Stax, Dracula, ဂျက်နှင့် The Beanstalk, အောင်မြင်သော, ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Rush, အလင်းအိမ်, ဒစ္စကိုလှည့်ဖျား, Koi မင်းသမီး, ဒဏ္ဍာရီလာအိမ်ထောင်မကျခင်, Sparks, စတစ်ကာများ, မှော် Portal, Blackjack Classic, အသီးဆိုင်, ပန်းပွင့်, မျှော်စင် Steam, Fisticuffs, ကံကောင်း Angler, လေဆင်နှာမောင်းခြံနဲ့ Escape, Subtopia, ဂျက် Hammer 2, ဘစ်ဘန်း, invisible က Man, South Park2ရက်ကြောင့်မှားယွင်း Chaos, slot ဘုရင်, ဂြိုလ်သား, တောက်ခြင်း, Guns N Roses, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏မဟာ, မောင်း, Aloha, လူးစ Hendrix, ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား, Nrvna, ဝက် Fly သောအခါ,, Motorhead, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Legends:ဧဒုံမြင်းစီး hood ကို, စစ်ဘုရင်များ:ပါဝါ၏ crystals, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirementThe following wallets will contribute towards the wagering requirement and in this order: ရီးရဲလ်ငွေစာရင်း, အပိုဆုပြီးတော့ FreeSpin Bonuses.Players တစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်.
သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “အကြှနျုပျ၏အကောငျ့ကိုသမိုင်း” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆိုင်းငံ့ဆုကြေးငွေတန်းစီပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အပိုင်း.
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခွအေန 150,000 အခမဲ့လည် Giveaway